Diesel Generator ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ - MECCA ပါဝါ
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / Diesel Generator ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
Diesel Generator ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-06-22 မူလ:ဆိုက်ကို
တစ် ဦး ၌တည်၏ဒီဇယ်မီးစက်အစုံသန့်ရှင်းသောလေကိုလေစစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်စစ်ထုတ်ကာဖိအားကိုလောင်စာဆီ injector မှဖိအားပေးမှုမြင့်မားသောဖိအားကိုထိုးသွင်းထားသည်။ ဤရွေ့ကားဓာတ်ငွေ့နှစ်ခုဒီဇယ်မီးစက်အစုံ၏ဆလင်ဒါ၌အပြည့်အဝရောနှောလျက်ရှိနှင့်ပစ္စတင်အရောအနှောညှစ်ဖို့ပစ္စတင်တက် ဓာတ်ငွေ့၏လျှော့ချပမာဏသည်အပူချိန်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ အပူချိန်အချို့အပူချိန်မြင့်တက်ပြီးနောက်ဒီဇယ်သည်လောင်ကျွမ်းသွားပြီးဓာတ်ငွေ့သည်အသံအတိုးအကျယ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်အကြမ်းဖက်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြင့်ပစ္စတင်ကိုတွန်းအားပေးသည်။ ဒီဇယ်လ်မီးစက်သတ်မှတ်ချက်သည်ဒီဇင်ဘာ၏စွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့လည်ပတ်ရန်မီးစက်များနှင့်မောင်းနှင်ရန်ဤနိယာမကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက် Diesel Generator Set ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးကြပါစို့။
Diesel Generator အစုံသို့မဟုတ် reefer မီးစက်သိုလှောင်ခြင်း
2. ကျေးဇူးပြု. 90 # သို့မဟုတ်အထက်မရရှိသောဓာတ်ဆီကိုသုံးပါ။ ဆီဖြည့်သည့်အခါဒီဇယ်ဆီမီးစက်၏လောင်စာဆီဌာနကိုပထမ ဦး စွာဖယ်ရှားပါ။ ထို့နောက်လောင်စာဆီကိုပြန်လည်ဖြည့်ပါ။ လောင်စာဖြည့်ဖြည့်ဆိပ်ကမ်းမှလောင်စာ filter filter ကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။
3. Crankcase တွင်သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်ရှိသောလေးထောင့်ကွက်မီးဆီကိုထည့်ပါ။ ဒီဇယ်ဆီမီးစက်အစုံ၏ရေနံစွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးရန်ရေနံ gauge ကိုဆွဲထုတ်ပါ။ ရေနံသည် gauge grid များအကြားရှိသင့်ပြီးအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာအလယ်တန်းဖြစ်သည်။ ရေနံကိုထည့်သောအခါအနက်ရောင်ရေနံဖြည့်ကွက်ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ရေနံထိုးရန်လက်ယာရစ်လက်ယာရစ်လက်ယာကိုလှည့်ပါ။ တစ်မိနစ်အကြာတွင်ဒီဇယ်ထွန်း့မီးရှို့ရေးထားသည့်ဆီတွင်ဆီပမာဏသည်သင့်လျော်မှုရှိမရှိကိုထပ်မံစစ်ဆေးပါ။
ဒီဇယ်ဆီ Generator Set သို့မဟုတ် Reefer Generators ကိုတစ်လကျော်မသုံးသောသို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားခြင်းမသုံးသောအခါ, အောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာသင့်သည်။
3. ဒီဇယ်ဆီမီးစက်သို့မဟုတ် refer generators ၏ crankces များ၌ဆီကိုယိုစီး။ ရေနံအသစ်ဖြင့်ဖြည့်ပါ။
4. Spark Plug ကိုဖွင့်ပါ။ မီးပွားပလပ်၏ပတ်ပတ်လည်တွင်အင်ဂျင်ဆီသို့အင်ဂျင်ဆီကိုလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ချောင်းကိုငါသွန်းလောင်းပါ။
5. ၎င်းသည်ဒီဇယ်ရောင်မီးစက်သို့မဟုတ် reefer generator များဖြစ်စေ, ၎င်းကိုခြောက်သွေ့သော, လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာ၌ဖြစ်စေ,
အကယ်. သင်သည်ဒီဇယ်ရောင်ချိန် (သို့) reefer generators များကို0ယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ MECCA Power သည် Global Power Support Power Initiative ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်မီးစက်ဒီဇိုင်း, လျှောက်လွှာနှင့်အပြီးတွင်ရောင်းချမှုအတွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ဒီဇိုင်းတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် Mecca Power သည်ကျယ်ပြန့်သော, သို့မဟုတ်အဝေးမှထိန်းချုပ်ထားရလိမ့်မည်။